Waa maxay Binance Smart Chain, sideese ugu xirtaa Metamask - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Waa maxay Binance Smart Chain, sidee buu ula xiriiraa Metamask
Tag: Binance, Buundada Binance, Chain Binance Smart, diidmada.io, Metamask
Binance ma ahan Binance kaliya, sidoo kale waa Binance Smart Chain.
Maxay caan ugu noqotay borotokoollada DeFi? Iskusoo wada duuboo waxaa mahad iska leh khidmadaha gaaska, guddiyada, oo aad u hooseeya marka la barbar dhigo kuwa Ethereum. Iyo sidoo kale xawaaraha xawaaraha ugu dhaqsaha badan. Waa laba arrimood oo aasaasi u ah inay soo jiitaan dhammaan ganacsatadaas ama xitaa kuwa xiisaynaya ee aan lahayn tirooyinka madaxda sidaas darteedna aad uga taxaddara kaydintooda. Haddii aad naftaada ku dhex aragto baaxaddan, hubaal waad rabtaa inaad wax badan ogaato.
Miyaadan iska qorin Binance? Ku samee xiriirinta gudbintaan si loo badbaadiyo 20% guddiyada weligood, dheef baad leedahay aniguna faaiido ayaan leeyahay. Haddii kale ha isticmaalin! Sidoo kale ma aha dhibaato sababtoo ah, waqtiga diidmada, Anigu ma ihi lataliye maaliyadeed wax walbana waxaan dhahaa gabi ahaanba looma jeedo in la siiyo talo ku saabsan maalgashiga khadka tooska ah ee cryptocurrencies. Waxaan u isticmaalaa madashan si aan u xafido fikradaha haddii kale madaxayga ku wareersan. Waxaan ku samayn karaa buug -yaraha xusuus qorka, laakiin mar walba waan ku fikiray wadaagiddu waa daryeel. Talada kaliya ee aan jeclaan lahaa inaan ku siiyo waa: had iyo jeer taxaddar, haddii aad rabto inaad ku ganacsato crypto, in lagu daboolo inaad maalgelinayso qaddar aad awoodi karto inaad lumiso adiga oo aan saamayn noloshaada ugu yaraan.
BSC (Binance Smart Chain) waxay martigelisaa aalado badan oo DeFI ah oo sameeya wax -soo -saar sare ama hooseeya, taas oo markaa leh heer sare ama ka hooseeya siday u kala horreeyaan. Had iyo jeer u fiirso meesha aad tagto si aad u dhigto lacagahaaga, waxaa ka buuxa fadeexad (rip-offs) sidoo kale Binance Smart Chain.
Waa maxay Silsiladda Smart Binance
Sida loogu xiro BSC Metamask
Lacag dhig dhig BSC
Aaway codsiyada DeFi ee ku yaal Binance Smart Chain?
BSC dhab ahaantii waa beddel u ah Ethereum: labadooduba waa xannibaado u socda si isku mid ah: dhammaan codsiyada lagu dhisay ETH waxay suuragal tahay inay la jaanqaadaan BSC. Haddii ETH ay leedahay khidmado sidaas u sarreeya (guddiyada) waxaa sababay xaqiiqda ah in shabakaddu ciriiri tahay, waxaa jira ansixinno badan oo la sameeyo ilbidhiqsi kasta oo adduunka ah (ETH waa xannibaad go'an baahsan) iyo si aad u gasho mid ka mid ah qanjidhadahan, adeegsaduhu waa inuu diyaar u yahay inuu bixiyo wax ka badan kuwa kale. BSC waa dhexe, waxaa jira tiro yar oo qanjidhada ah laakiin waxqabad aad u fiican. BSC sida cad waa qayb Binance ah, laakiin ma aha in lagu khaldo Silsiladda Binance oo ah qaybta Is -weydaarsiga. Binance smart Silsiladdu waxay taa beddelkeeda oggolaanaysaa suurtagalnimada in la fuliyo Qandaraasyada Caqliga leh lana horumariyo dApps (codsiyada baahsan).
Ku wareejinta lacagaha BSC, ha ahaato boorsada dibedda ama si toos ah boorsada Binance waa waxa ugu horreeya ee fiiro gaar ah la siiyo. Silsiladda Binance waxay leedahay heerka BEP2 (Soo -jeedinta Evolution Binance Chain 2) halka Binance Smart Chain ay leedahay heerka BEP20. Iska jir, waa laba shay oo kala duwan.
Hadda aan aragno sida loo habeeyo Metamask si loogu xiro BSC iyo sida ammaan ahaan loogu wareejiyo lacagaha BSC.
Metamask waa shaki la'aan buundada ugu raaxada badan adduunka DeFi (waxaan ka hadlayaa halkan): waa fidiyaha biraawsarka (wuxuu ku shaqeeyaa biraawsar ku habboon chrome) oo kuu oggolaanaya inaad la falgasho codsiyadaas. Isha ku jirta soo dejinta, waxaa jira been abuur ah oo orda. Waxaad ka soo dejisan kartaa kan rasmiga ah adiga oo aadaya mareegaha shirkadda, metamask.io.
Marka la rakibo, waxaad dooran kartaa inaad abuurto boorsada cusub ama aad soo dhoofsato boorsada aad meel kale ku haysato: halkaas oo boorsada kasta lagu qoro xannibaadaha dhexdooda, Metamask wuxuu u dhaqmaa sidii buundo oo uu u geli lahaa boorsadaas, waa dhexdhexaadiye. Waxa kale oo suurtogal ah in la soo dhoofiyo boorsada qalabka (boorsada jirka ee jeebkaaga lagu hayo - amniga marna ma badna. Xusuusnow: ma aha furayaashaada, ma aha crypto -kaaga!) Waxa kale oo aan dhex gali doonnaa mawduucan.
Maaddaama Metamask loo abuuray inuu la xiriiro shabakadda Ethereum, mar haddii kordhinta la hawlgeliyo taasi waxay noqon doontaa shabakadda la soo xulay sida caadiga ah, waxaa laga arki karaa xagga sare ee u dhow dawacada.
Si kastaba ha noqotee, waad arki kartaa inay sidoo kale tahay menu hoos-u-dhac ah: haddii aan gujiyo, xagga hoose waxaan leeyahay codka RPC -ga caadada ah. Sheygani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gasho xuduudaha noo oggolaan doona inaan ku xirno Metamask BSC.
Waa maxay cabbirrada la geliyo? Binance waxay iyaga toos ugu sheegtaa Akadeemiyadda Binance (halkan linkiga si aad u hubiso in ay yihiin kuwo cusub), oo waxaan ku dhejin doonaa halkan:
Magaca Shabakadda: Silsilad Smart
URL RPC cusub: https://bsc-dataseed.binance.org/
URL -ka Xannibaadda https://bscscan.com
Waa maxay sababta aan dheelitir ula leeyahay Ethereum oo aan u arko inay ku madhan tahay BSC? Sababtoo ah sidii hore loo sheegay, waa laba xannibaad oo kala duwan! Waxaan hadda diyaar u nahay inaan lacag ku shubno boorsadayada ku xiran BSC ee Metamask oo aan ugu adeegsanno DeFi iyo codsiyadeeda.
Marka sidee baad lacag ugu shubtaa boorsadayada cusub BSC? Waxaa si toos ah looga sameeyaa Binance. Gelinta jeebkaaga midigta sare, shaashadda Xisaabta Guud waxaan ka helnaa badhanka Ka -noqoshada. Qaybta Ka -noqoshada waxaan ku doorannaa Cryptocurrency, waxaan ku doorannaa crypto aan rabno inaan ku wareejino dhinaca midigna waxaan dooran karnaa inaan dooneyno inaan ku beddelno qadaadiicda Binance Smart Chain.
Adigoo dooranaya ikhtiyaarkan, nidaamku wuxuu na weydiinayaa: ma hubtaa inaad u wareejinayso barxad ama barnaamij iyaga taageera? Daawo iyaga oo luminaaya! Laakiin waxaan hadda dhisnay Metamask, waxaan diyaar u nahay inaan sameyno.
Binance, oo noqota shirkad aad u daran, xitaa waxay qaadataa kedis yar si loo hubiyo inaad ogtahay waxaad samaynayso. Ma rabo inaan halkan ku bixiyo jawaabaha, waxaa muhiim ah in tan la fahmo intaan sidaas la samayn. Si taxaddar leh u akhri tilmaamahayga.
Adigoo dejinaya cinwaanka boorsadayada, oo aan ka soo qaadanno Metamask sida ku xusan Koontada 1, iyo xaddiga crypto ee aan rabno inaan ku wareejino, waxaan kaliya u baahanahay inaan xaqiijino macaamilka Hubiyahayaga waana intaas. Si aan kuu tuso caddayntan, waxaan dhaqaaqay 0,1 BNB, qiyaastii 20 €.
Waxaan ku qoray buundada xannibaadda in 0,1 BNBs loo wareejiyay BSC, cinwaanka aan u sheegay. Nuqul cinwaanka macaamilka oo ka hubi BscScan.com haddii aad rabto inaad hubiso tallaabooyinkan. Xannibaadda xannibaadda ayaa ah mid dabiici ah oo loo heli karo qof walba.
Halkan, haddii aan ku laabto Metamask -keyga, waxaan arkaa tirooyinka la wareejiyay oo loo beddelay BNB. Mararka qaarkood waxay qaadataa dhowr daqiiqo, waqtiyo kale dhowr saacadood… Waxaan ogaaday dhowr kala duwanaansho. Laakiin way yimaadaan.
Waxaa kaloo jira hab kale oo halkaas ka jira Buundada Binance, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku wareejiso crypto ka soo jeebka jirka si toos ah BSC.
Waxaan aakhirka la macaamili karnaa BSC iyo codsiyadeeda DeFi.
defistation.io: Difaaca ayaa asal ahaan ah darajada mashruuca DeFi iyo mareegaha falanqaynta ee mashaariicda maaliyadeed ee baahsan ee la dhisay laguna socodsiiyey Binance Smart Chain. Mashruucan waxaa soo diyaariyay oo gacanta ku haya Cosmostation waxaana maalgeliyay Binance. Waxaad ka eegi kartaa wadarta qiimaha qufulan ee mashaariicda DeFi ee Binance Smart Chain waqtiga dhabta ah. Jaangooyooyinka iyo jaantusyada lagu soo bandhigay Difaaca waxay kuu oggolaanayaan inaad hesho aragtiyo ku aaddan isbeddellada iyo dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya ee maaliyadda baahsan.
Dhammaan mashaariicda DeFi ee ku taxan Difaaca waxay maraan habka baaritaanka bilowga ah, oo ay ku xigto taxaddar aad u adag iyo isgaarsiin taxane ah si loo xaqiijiyo sax ahaanshaha macluumaadka na tusay. Mashaariicda leh sumad “Xaqiijiyay” oo ku xigta magacooda waa mashaariic xaqiijiyey in liiska qandaraasyada ku jira xisaabinta TVL uu yahay mid cusub oo sax ah.
Difaaciddu waxay uruurisaa liiska qandaraasyada iyo ABI -yada (isdhaxgalka modules -ka) ee qandaraasyada mashruuc kasta si loola socdo dheelitirkooda dhaqaale ee Binance Smart Chain. Isugeynta dheelitirka Heshiis kasta oo Smart ah ayaa markaa la xisaabiyaa iyadoo la isu geeyo wadarta guud ee calaamadaha BNB iyo BSC saacad kasta. Wadarta qiimaha qufulan waxaa lagu muujiyaa qaadashada qadarkaan oo lagu dhufto qiimaha doolarka (USD) ee calaamad kasta.
Isla marka aad gasho defistation.io, waxaad arkeysaa darajadan mashaariicda DeFi, oo sida caadiga ah waxaa lagu kala soocay Locked, taas oo ah, xaddiga lacagta mashruuca laftiisa lagu isticmaalo.
Kani waa meesha saxda ah ee lagu doorto mashruuca DeFi ee aad ugu xiiseyneyso, guji mashruuca aad xiiseyneyso (isha ku hay in kan ugu horreeya ee leh ereyga Ad uu yahay xayaysiis - Xayeysiis), oo bilow inaad barato.
Iyada oo badhanka leh Fur Dapp waxaa lagugu qori doonaa mashruuca.
Qaar ka mid ah dApps -kan ayaa mudan in la falanqeeyo… la soco.
Maqaalka xigtaSidee Margin Trading (LEVA) loogu sameeyaa Binance?